Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Xuquuqda Aadanaha » Biibiile, Xero Qoolley: Meesha ay ku noolyihiin Guri -laawayaasha
dhaqanka • Xuquuqda Aadanaha • News • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Meesha ay hoylaaweyaashu ku nool yihiin
Iyada oo ay jiraan dad badan oo shaqo la’aan ah iyo qaar badan oo dib uga dhacay kiradooda ama amaahda guryaha, hoy la’aanta ayaa sii noqonaysa cudur sii faafa sababtuna tahay masiibada COVID-19.
Kuwa nasiibka u leh, kuwa isu arka inay hoy la 'yihiin waxay awoodaan inay la dejiyaan xubnaha qoyskooda guryahooda.
Kuwa aan haysan meel kale oo ay aadaan, waxaa jira hoy, laakiin boosku aad buu u kooban yahay.
Markaa kuwa isku arka waddooyinka waxay heleen habab u gaar ah oo ay kula tacaalaan hoy la'aantooda.
Malaha qaabka ugu badan ee guryaha ku meelgaarka ah waa teendho. Waxay u soo baxaan sida bulshooyin yar oo ku teedsan hareeraha waddooyinka iyo jardiinooyinka sida ugu dhaqsaha badan boqoshaadu u soo baxdo habeenka. Magaalooyin badan ayaa sameeya “xaaqid” waxayna ku qasbaan dadka hoylaawaha ah inay baxaan, kaliya inay helaan xeryo cusub oo meel kale loo raray maalinta ku xigta. Waa ciyaar joogto ah oo laaluushka lagu rogo oo lagu gudbo guddida ciyaarta Monopoly ee hoylaawe.
Buundooyinka hoostooda waa meelo caadi ah oo hoyga urursada oo runtii badiyaa waxay leeyihiin beelo aad u faahfaahsan. Waxay kaa caawinaysaa inaad xoogaa hoy ka samaysato xagga cimilada iyo sidoo kale inaad ka maqnaato indhaha wax-ka-qabashada dadka aan hoy-la'aanta ahayn. Tiro ka mid ah meelahan waa xeryo, magaalooyin yaryar, kuwaas oo saldhig u ah macno ahaan dhowr boqol oo qof.
Qaar badan oo dhowaan hoylaawe ahaa, weli waxay haystaan ​​baabuurkoodii oo halkaas ayay degi doonaan. Ku noolaanshaha baabuur waxaa lagu magacaabaa Hoyla'aanta Gawaarida, waxayna ku soo badaneysaa magaalooyinka ku yaal Mareykanka. Waxaa jira in ka badan 16,000 oo qof oo ku nool baabuurtooda magaalada Los Angeles, California, oo keliya.
Magaalooyinka qaarkood, sharciyada ayaa la ansixiyay si loola dagaalamo dadka bilaa hoyga ah laga bilaabo hurdada baabuurtooda. Magaalooyinka kale ee leh quluubta naxariista leh waxay ku shaqeeyaan baarkinno si dadku u dhigtaan habeenkii si ay ugu seexdaan baabuurtooda. Wararka xanta ah ayaa sheegaya in WalMart uu cafin karo baabuurta ku hoyanaysa baarkinadooda.